Etu esi ewepu gi | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Etu puru ibu bu nsogbu ohuru na-emetụta otutu ndi uwa. E nwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche ị nwere ike isi wepu nsogbu a, ọ bụ maka ha ka a ga-atụle n'isiokwu a.
Ibu oke ibu abụghị naanị ọdịdị jọgburu onwe ya, kamakwa ọ bụ nsonaazụ na-adịghị mma maka ahụike n'ozuzu ya. N’inwe ibu gabigara ókè n’ime mmadụ, ọrụ nke ngwu, obi, akụrụ na akụkụ ahụ ya ndị ọzọ nwere ike imebi.
A na-enwekarị ikpe mgbe mmadụ malitere ahụ ike ya, nwee oke ibu, na n'ihi nke a, ọrịa nke abụọ malitere, nke na-ebute nsonaazụ ọjọọ.
Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ịgbaso ụkpụrụ nke nri dị mma ma dị mma, yana ilele ibu na ahụike gị.
Kedu otu esi egbochi ọdịdị nke oke ibu?
Ka ị ghara ịlụ ọgụ karịa ego, ọ kacha mma ịghara 'inweta' ha, maka nke a ị ga-esoro ndụmọdụ na usoro ole na ole.
Iji gbochie ọdịdị nke oke ibu ịchọrọ:
debe ụkpụrụ nke nri dị mma;
nye anụ ahụ oke mmiri;
Erila nri na-emerụ ahụ;
Ndụmọdụ ndị a niile dị mfe iji soro, n'ihi na ha anaghị achọ nnukwu mbọ, oge, na obere ego.
Na-eri nri dị mma ma na-abanye maka egwuregwu, ọ bụghị nanị na ọ ga-eme ka ahụ ya dị mma, kama ọ ga-eme ka ahụike ya na ọdịmma ya ka ọ dị elu.
Kedu otu ị ga-esi felata na-enweghị mmerụ ahụike?
Ma ọ bụrụ na, enwere nsogbu dị oke ibu, mgbe ahụ a ga-achọrịrị usoro ọkachamara na ndidi ebe a.
Nke mbu, ị ga - ahapụ nri eghe, ihe eji echekwa nri, nri dị mma, ihe ọenceụ carbonụ carbonated na mmanya - ngwaahịa ndị a na - emebi ahụ.
Ahụ nwere chọrọ mmiri zuru oke - mmiri dị ọcha, esighi n’ime ya kọfị, ihe ọ andụ andụ na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ, ya bụ na mmiri dị ọcha.
Usoro mmiri dị kwa ụbọchị dị lita 2-3, mana ọ dabere na ịdị arọ onye ahụ.
Iji wepu oke ibu, ikwesighi iso ihe oriri na-agwụ ike, nwee agụụ wee nọdụ n'ụlọ nzukọ egwuregwu maka ụbọchị.
Shouldkwesịrị ịgbaso ndụmọdụ ụfọdụ dị mfe nke ga - enyere aka ọ bụghị naanị ifelata, kamakwa mee ka ahụike na ahụ nwee ụda, maka nke a ịchọrọ:
1. Ihe oriri kwesịrị ekwesị. Ọ dị oke mkpa ịgụnye n’ime nri izu gị: nri na mkpụrụ osisi ọhụrụ (radishes, unere, tomato, kukumba, ose na ihe ndị ọzọ), anụ anụ, nsen, ngwa nri sitere na ya, mmiri ara ehi na mmiri ara ehi, ọka, nri bred, azụ, poteto na ọka. .
2. Nri nri. Eri kwesịrị ịbụ obere akụkụ 3 ugboro n'ụbọchị, a na-amachibido ị oveụbiga mmanya ókè.
Ọ bụrụ na agụụ na-enweghị ike iguzogide agụụ na-ebilite n'etiti nri, ị nwere ike ịme obere nri site na iri apụl, yogọt ma ọ bụ obere abụba.
3. Ndụ ike n'ọrụ. Iji felata, ịchọghị nri siri ike, mana egwuregwu dị egwu bụ ihe dị oke mkpa maka ịbelata oke dị oke oke.
Ọ dịghị mkpa ịme oge atọrọ, ọ ga-ezuru gị ịgagharị n'ogige ahụ, na-emega ahụ tupu ị lakpuo ụra na mgbe ụra gasịrị, yana squat ma rụọ ọrụ dị mfe.
Dịka ọmụmaatụ, mgbada sitere n’ala, mmega ahụ n’elu ebe kwụ ọtọ na ihe ntụchi, mmega ahụ n’egwuregwu mgbatị ahụ na ịwụ elu bụ ihe zuru oke iji tufuo kilogram ọzọ, mee ka ahụ nwee ike, nyekwa anụ ahụ ahụ efe na ọdịdị.
Ọ bụghị naanị na ọ bụghị uru ịgbaso nri siri ike na agụụ, mana ọ dịkwa ize ndụ, n'ihi na nke a na-edugakarị n'ọnọdụ ndị ka njọ. Ọ bụ ya mere, ịkwesịrị iji nwayọ ma bịaruo nso n'okwu a n'ọgụ megide oke ibu.
Na-agbaso ndụmọdụ dị na edemede nke taa, mmadụ nwere ike iwepụ kilogram ọzọ, weta ahụ ya na ụda, yana ahụike ya laghachi na nkịtị.
Ajuju 19 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,383.